Wejigaaga Dhex dhig Iftiinka | Martech Zone
Dheji Wejigaaga Nalalka
Khamiista, Sebtember 13, 2012 Khamiista, Sebtember 13, 2012 Douglas Karr
Dadku waxay iloobaan lambarrada taleefannada, astaamaha, magacyada iyo URL-yada… laakiin ma iloobaan wejiyada sida caadiga ah. Waa sababta aan ugu talineyno in dhammaan macaamiisheennu ay wejiyadooda dibadda ka saaraan! Inbadan iyo ka badan, joogitaankeena bulsheed, qoraaladayada blog-ka iyo xitaa natiijooyinka raadinta waxay bilaabeen inay muujiyaan wajiyo. Wejiga saaxiibtinimadu waa albaab raaxo leh oo lagu helo rajooyinka kaa horeeya waana inaan la dhayalsan.
Ii aamin, kumana dhigo 'mug muggeyga' meel walba maxaa yeelay waxaan jeclahay naftayda. Waxaan u sameeyaa si ay dadku u sii wadaan inay i aqoonsadaan. Marka… iska daaya wax walba oo samee waxyaabaha soo socda:
Raadi sawir qaade weyn - ha u dhaafin sawirkaaga kamarad iPhone ama laptop-kaaga photogra sawir qaade weyn ayaa dajin doona laydhka, wuxuuna ku siin doonaa sawir qoto dheer oo u dhigma shakhsiyaddaada. Waxaan jecelnahay Paul D'Andrea's shaqo! Ku kalsoonow xukunkooda goobta iyo muuqaalka!
Isku qor a Gravatar account - ku dheji sawirkaaga, ku dar oo xaqiiji dhammaan cinwaanada emaylkaaga. Gravatar waxaa ka faa'iideysta inta badan nidaamyada faallooyinka marka lagu daro WordPress (yaa iska leh barmaamijka) waana la ixtiraamaa si caalami ah. Hadda wejigaagu wuxuu si isdaba joog ah u soo bandhigi doonaa haddii aad ku jirto faallo ama aad ku jirto bogga 'WordPress profile'.
Isku qor Google+ - Haddii aad ku darto boggaga aad wax ku biiriso boggagaaga Google+, sawirkaagu wuxuu xitaa soo bandhigi doonaa natiijooyinka raadinta haddii calaamadeynta qoraalku ay ku dhex jirto goobta (inta badan aaladaha wax lagu qoro ayaa tan hirgeliyey). Mararka qaarkood Google+ ayaa soo bandhigaya sawirkaaga iyadoon calaamadeyn, sidoo kale!
Buuxi astaantaada WordPress - plugins weyn sida Yoast's WordPress SEO plugin ku dar goobo si aad u dhigto astaantaada Google+, adigoo siinaya calaamadeynta lagama maarmaanka ah si sawirkaagu u muujiyo natiijooyinka raadinta.
Isku day inaad xafido sawiradaada iswaafaqsan dhammaan astaamahaaga shabakadaha bulshada. Markuu qof bilaabo inuu arko wajigaaga faallo qoraal ah, kadibna Facebook, iyo Twitter, waxay u badan tahay inay noqdaan taageere, raac ama xitaa macmiil! Waxaan macno u lahaa inay dadku iila socdaan Paris ilaa San Francisco oo igu aqoonsaday sawirkayga… waxaa lagu bixiyaa faa iido
Xirfad yaqaan ahaan meesha, waxaan kugula talin lahaa kahortaga kartoonada (mooyee inaad tahay kartooniste) ama sawir kale. Ilaa ay yeeshaan cillad naadir ah oo loo yaqaan prosopagnosia, bini'aadamku waxay aqoonsadaan wejiyada aad uga fiican sida ay u xasuustaan ​​faahfaahinta kale ee ku saabsan ganacsigaaga ama alaabadaada iyo adeegyadaaga.
PS: Mawduucan blog-ka waxaa dhiirrigeliyay maareeyaha mashruuca, Jenn Lisak, u diraya emayl aad u wanaagsan macmiil isla sharxaya!
SERPs Waxay Bilaabaysaa Tilmaamaha Isbadalka Mashiinka Raadinta
Boosto weyn. Sidaan ognahay qofwalba waa u gaar marka muuqaalka shaqsiyeed ee qof walba waa kala duwanaansho.